Undertones: Herisetra an-jotra ao Myanmar, Pakistan rakotra zavo-tsetroka · Global Voices teny Malagasy
Ny fahavitrihan'ny fahefana ao Myanmar sy Pakistan, anjotra sy ivelan-jotra
Voadika ny 02 Janoary 2022 5:04 GMT
Hetsi-panoherana tany Myanmar manohitra ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila tamin'ny 14-Febroary 2021/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Tongasoa eto amin'ny Undertones, gazety Civic Media Observatory ! Isaky ny fanontana, dia mamakafaka hetsika, fironana mipoitra, na tantara saro-takarina izahay, mamantatra ireo fitantarana manan-danja ho amin'ny tombontsoam-bahoaka maika, mamakafaka lalina ny toe-javatra sy ny foto-kevitry ny haino aman-jery eo an-toerana, amin'ny fiteny mahazatra sy fiteny maro. Manolotra toerana fidirana amin'ny fehezan-drakitra ho an'ny daholobe izay manohana ny asanay ao amin'ny Observatory ihany koa ny Undertone.
Misorata anarana amin'ny Undertones
Mampiasa ny sehatra anjotra ireo mpanohana ny miaramila ao Myanmar mba hanandratra ny fitantaran'ny mpomba ny miaramila raha manitsakitsaka ny zon'olombelona ny fitondrana miaramila.
Mikasa handràra ireo lahatsoratra amin'ny media sosialy miresaka fahalotoan'ny rivotra ao amin'ny faritra ny governemanta ao amin'ny faritr'i Punjab ao Pakistan. Na dia voatantara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena aza ny krizin'ny setroka ao Pakistan, tsy dia nisy loatra ny fifantohana amin'ny ezaka nataon'ny governemanta hanivanana ny fihetseham-pon'ny olom-pirenena amin'ilay raharaha.
FAHAVITRIHAN'I MYANMAR ANJOTRA SY ANDAVANANDRO
Taorian'ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramilan'i Myanmar tamin'ny volana Febroary 2021, nanomboka nanamafy ny fanohanany ny hetsiky ny miaramila, anisan'izany ny filan-kevitry ny miaramila sy ny hetsika feno herisetra ataony, ny sehatra iray kely be feo ao anaty vahoaka Birmana. Milaza ity ankolafy mpomba ny miaramila ity fa mpanohitra mitondra herisetra amin'ny tenany amin'ny alalan'ny fitolomana fotokevitra tsy afaka ireo mpanohana ny demaokrasia.
Hamarinin'ireto mpanohana ny miaramila ireto ny famonoana miaramila vao haingana ho toy ny valifaty ilaina atao amin'ny amin'ny Herim-Piarovam-Bahoaka – People's Defence Force (PDF), elatra mitam-piadian'ny governemanta an-tsesitany. Manondro ny PDF ho “mpampihorohoro”, teny efa nampiasain'ireo mpanohana azy avy hatrany ny filankevitry ny miaramila.
NAHOANA NO MIRAHARAHA?
Misy vokany ivelan'ny aterineto ny lahatsoratra sy fanehoan-kevitra ao amin'ny media soséée cddf5ialy izay manohana an-karihary ny fihetsiky ny miaramila amin'ny sivily. Ankoatra ny hoe mahasosotra ny mpamaky, manamafy ny finoana ny lahatsoratra toy izany fa azo ekena izany — na ilaina mihitsy aza — mba hanaovana herisetra amin'ireo izay manatevin-daharana ny mpomba ny demaokrasia. Tamin'ny 5 Desambra, kamiao miaramila iray no nifatratra tamin'ny vahoaka mpanao fihetsiketsehana, ka nahafatesana olona dimy. Roa andro taty aoriana, voalaza fa voarohirohy tamin’ny fandoroana olona 11 velona tao anaty ala tany amin’ny faritr’i Sagaing ny miaramila.
“Voamarina ny herisetra mihatra amin'ny mpanohana ny demaokrasia”
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fahatakarana ny fahavitrihan'ny tanjaky ny aterineto sy ivelan'ny aterineto ao Myanmar ireo mpanohana miaramila an-tserasera. Maneho ny heviny an-karihary amin'ny media sosialy ireo mpanohana ny miaramila ary mikendry ireo mpanohana ny demaokrasia ihany koa.
Lahatsoratra iray nisy nizara imbetsaka avy amin'ny mpanoratra propagandy mpomba ny miaramila mitondra ny anarana Shwe Moe Win no niantso ireo niharam-boina tamin'ilay zava-nitranga tamin'ny kamiao tamin'ny 5 Desambra ho “mpiantra olombelona mpilela-body”, ary nanambara fa “tsara fanahy [tamin'izy ireo] ny miaramila.” Nivezivezy tany amin'ny sehatra mpomba ny miaramila tao amin'ny Facebook ity lahatsoratra ity ary nahazo fanehoan-kevitra miabo an-jatony.
Ny lahatsoratra media sosialy hafa manohana ny miaramila dia tsy dia mibaribary loatra. Thazin Oo, mpanohana miaramila manana mpanjohy maherin'ny 100.000 ao amin'ny Facebook, nilaza fa “mitady izany” ireo mpanohana ny demaokrasia amin'ny alalan'ny fampirisihana ady an-trano.
Ireo lahatsoratra roa etsy ambony dia nomena naoty ambany indrindra tao amin'ny rafitra fanomeza-naoty an'ny Civic Media Observatory noho ny fiparitahan'izy ireo lasa lavitra sy ny fileferana ary ny mety ho fampirisihana herisetra.
Ireo lahatsoratra hafa, toy ity sioka mitsikera ny fiantraikan'ny vaovao iray ity no manasongadina ny fahasarotana manodidina ny asa fanaovan-gazety ao Myanmar, ny fitantarany, ny anjara asany eo amin'ny politika, ary ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiarahamonina.
Jereo ny angona Myanmar manontolo
Jereo ny fandrakofana manokana an'ny Global Voices momba an'i Myanmar.
Isaky ny ririnina i Pakistan miaina krizin-javotsetroka izay tsy misy iraharahan'ny governemanta ao amin'ny faritra Punjab azy. Ankehitriny ny manampahefana miezaka manivana ireo tsikeran'ny fomba fitantaran'ny governemanta ny toe-draharaha, mampiasa ny lalànan'ny heloka anjotra ao Pakistan.
Ao Lahore, tanàna faharoa lehibe indrindra ao amin'ny firenena, mizara ny ahiahiny amin'ny fampiasana farangoteny #SaansLenayDo (AvelaoIzahayHiaina) ireo mponina miaritra mafy ny fiantraikan'ny zavo-tsetroka. Mizara ihany koa ny torohay tondrom-pahatsaran'ny rivotra ao Lahore ny mpikaroka ara-toetrandro sy ny mpanao gazety mba ho fanairana.
Anisan'ny kasinga mahatonga ny fandotoan-drivotra ny setroka fandorana [mololo…] sy ny setroka gazoala, ary ao ihany koa ny marika hafanana mihamangatsiaka kokoa noho ny krizin'ny toetrandro amin'ny ankapobeny.
Devanshi/CC0 – Free to Use
NAHOANA NO HIRAHARAHA?
Manana fiantraikany lalina amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana tokoa ny krizin'ny zavo-tsetroka ao Lahore. Lahore no tanàna anjakan'ny fandotoana indrindra eto ambonin'ny tany. Manodidina ny 128.000 eo ho eo ny isan'ny Pakistaney maty isa-taona noho ny aretina azo avy amin'ny fandotoan-drivotra ary vao maika manampy trotraka amin'ny soritr'aretina izy io raha misy ny tratran'ny COVID-19. Nefa amin'izany ny governemantam-paritra ao Punjab manivana ireo olona mizara angon-drakitra ara-tsiantifika na an'olontsotra momba ny zavo-tsetroka, amin'izay fotoana izay dia mametra ny fahazoana torohay tena ilaina sy manabitika ny fiantraikan'ny maha-hamehana ny toe-pahasalamam-bahoaka.
Fomba fitantarana mievotrevotra
“Tsy tokony hibedy ny antoko mitondra amin'izao fotoana noho ny krizin'ny fandotoana ny fiarahamonina”
Mampiroborobo fitantarana maro manala ny andraikitra ny antoko mitondra Pakistan Tehreek-e-Insaf na PTI, ny manampahefana ao Punjabi. Ankoatra ny fanomezana tsiny ireo mpitondra teo alohany noho ny fandotoana raiki-tapisaka, dia tsipahin'ny minisitry ny fiarovana ny tontolo iainana ao Punjab, Muhammad Rizwan, tsotra izao ny fisian'ny zavo-tsetroka.
Fangatahana hihetsehana araka ny lalànan-tserasera, avy amin'ny Minisitry ny fiarovana ny tontolo iainana ao Punjab, Muhammad Rizwan. 16 Novambra 2021.
Milaza ihany koa ny departemantan'ny tontolo iainana ao Punjab fa misy ireo “olona anti-Pakistan mizara angon-drakitra hosoka” ho fanimbana ny endriky ny firenena.
Ao amin'ny taratasy iray ho an'ny Federal Investigation Agency (FIA), nangatahan'i Rizwan io sampan-draharaha io hanasazy izay olona na fikambanana mizara ny angon-drakitry ny tondron-kalitaon'ny rivotra ao amin'ny media sosialy tsy nahazoana fankatoavana avy amin'ny departemantan'ny governemanta araka ny lalànan'ny heloka anjotra ao amin'ny firenena. Na dia mbola vao fangatahana fotsiny aza io dia efa ampy niteraka tahotra hampisalasala ny olona hoe hanaitra amin'ny fisian'ny krizin'ny zavo-tsetroka amin'izao fotoana izao va re?
Na izany aza anefa dia mbola nizara ny ahiahiny tao amin'ny Twitter ihany ny Pakistaney ary nanameloka ny fihetsika nataon'ny governemanta.
Jereo ny fehezan-drakitra manontolo momba an'i Pakistan ato aminay.
Undertones dia taratasim-baovaon'ny Civic Media Observatory, natsangana avy amin'ny fiaraha-miasan'ny mpikaroka ao amin'ny Observatory, ny tonia mpandrindra, ary ny mpanoratra ny tetikasa. Jereo bebe kokoa ny momba ny iraka, fomba fiasa, ary ny angon-drakotra azon'ny daholobe hojerena.